သုံးသပ်မှု Mbuynow IP Camera၊ သင်၏လုံခြုံရေးစနစ်သည်အခကြေးငွေမပေးဘဲ | Androidsis
ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ Mbuynow IP Camera၊ သင်၏လုံခြုံရေးစနစ်သည်အခကြေးငွေမလိုပဲ
ဒီတစ်ခါတော့မင်းတို့နောက်တစ်ခါထပ်ပြော ဦး မယ် တစ်အိမ်လုံခြုံရေးကိရိယာ။ လိမ့်မည်ဟုတစ် ဦး ကဗီဒီယိုစောင့်ကြည့်ကင်မရာ ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ် (သို့) စီးပွားရေးကိုအချိန်တိုင်းစောင့်ကြည့်နေသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဝိုင်ဖိုင်ဆက်သွယ်မှု IP ကျွန်ုပ်တို့မည်သည့်နေရာသို့မဆိုကာကွယ်ထားသောareaရိယာကိုတိုက်ရိုက်လွှင့်ထုတ်နိုင်သည်။
သင့်မှာစမတ်တီဗီ၊ စပီကာနှင့်စမတ်ဖုန်းရှိရင်၊ ဒီကင်မရာသည်သင်၏အိမ်ငယ်အလိုအလျောက်မိသားစုကိုဖြည့်စွက်ရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ သင်ဆက်သွယ်မှုအားလုံးရှိလိမ့်မည်၊ သင်စိုးရိမ်ပူပန်မှုမရှိဘဲအိမ်မှထွက်ခွာနိုင်သည်သို့မဟုတ်သင်၏စီးပွားရေးကိုစွန့်ခွာနိုင်သည်။ မင်းကိုတွေ့မယ်အချိန်မရွေးရုပ်ပုံများကိုအသက်ရှင် သင့်ရဲ့တက်ဘလက်, စမတ်ဖုန်းသို့မဟုတ်ကွန်ပျူတာကနေ။
1 Mbuynow IP Camera, ဘယ်နေရာမှမဆိုထိန်းချုပ်ထားတယ်
2 ဒါက Mbuynow ကင်မရာပါ
6 Mbuynow IP Camera ၏ကောင်းကျိုးနှင့်ဆိုးကျိုးများ
Mbuynow IP Camera, ဘယ်နေရာမှမဆိုထိန်းချုပ်ထားတယ်
Wi-Fi စောင့်ကြည့်တဲ့ကင်မရာရဖို့သင်အကြိမ်ကြိမ်စဉ်းစားခဲ့ဖူးတယ်ဆိုရင်၊ သူတို့မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုမသိသည့်အပြင်၎င်းကိုမည်သို့တပ်ဆင်သည်၊ သို့မဟုတ်၎င်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်နိုင်သည့်အရာတို့ကိုသင်မသိနိုင်ပါ။ မင်းဘာမှစိတ်ပူစရာမလိုဘူးလို့မင်းတို့ပြောပြီးပြီ။ ဤနေရာတွင် Mbuynow IP 360º Surveillance Camera ကိုဝယ်ပါ ထက်နည်း€ 100 သည်။
Mbuynow ကင်မရာ၏လုပ်ဆောင်မှုသည်သင်မြင်နိုင်သည်ထက်ပိုမိုလွယ်ကူသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် pre-installed software ကို အရာအားလုံးအပ်ချုပ်နှင့်သီချင်းဆိုလိမ့်မည်။ ပြီးပြည့်စုံတဲ့လမ်းညွှန်ထဲမှာတွေ့ရမဲ့ရိုးရှင်းတဲ့အဆင့်တွေကိုလိုက်လုပ်ပါ၊ ဖွင့်ပါ၊ လိုက်နာပါ။ သင်မျှော်လင့်ထားတာထက်စောပြီးစောင့်ကြည့်ကင်မရာကိုသုံးပါလိမ့်မယ်။ ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့ application ကအဲဒါနဲ့အများကြီးသက်ဆိုင်ပါတယ်။
Y37LAI3Q ကုဒ်နံပါတ်ကိုသုံးပြီး Amazon တွင် ၁၀% လျှော့စျေးဝယ်ပါ
ဒါက Mbuynow ကင်မရာပါ
ကိုယ်ထိလက်ရောက်ကျနော်တို့မတိုင်မီဖြစ်ကြသည် ဂန္ပြင်ပစောင့်ကြည့်ကင်မရာ။ တည်ဆောက်ထားသည် အရည်အသွေးကောင်းပလပ်စတစ် နှင့်ခုခံ အဖြူရောင်။ ၎င်း၏ဒီဇိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းကိုအသုံးပြုခြင်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုကန့်သတ်ခြင်းသို့မဟုတ်ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသောနည်းလမ်းဖြင့်အသုံးပြုရန်ကျွန်ုပ်တို့အားအတင်းအကျပ်ပြုလုပ်နိုင်သည့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုတွေ့ရှိရသည်။ ပြီးတော့သူ့ရဲ့လုပ်ဆောင်မှုကအမြင့်ဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်ကိုပေးဖို့ဒါကိုလုပ်ရမယ်။
ထိုအကြောင်း ၎င်း၏ပုံသဏ္ာန်အားဖွငျ့ဖွစျသညျ, နှင့်၎င်း၏လည်ပတ်ဝက်ဝံကိုရှာဖွေသောအစီအစဉ်, နံရံပေါ်မှာဘေးတိုက်ဆွဲထားဖို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ အကယ်၍ မျက်နှာကျက်မှဆွဲခြင်းသို့မဟုတ်စားပွဲသို့မဟုတ်စင်ပေါ်ကဲ့သို့ပြားပြားသောမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်သုံးလျှင်၎င်းသည်360ºကိုကောင်းကောင်းဖုံးအုပ်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ သောကြောင့် ကျနော်တို့ထောက်ခံမှုဒေါင်လိုက်ရှိရာတည်နေရာကိုရှာဖွေရပါလိမ့်မယ်.
၎င်း၏အထက်ပိုင်းတွင်ရှိပါတယ် wifi ဆက်သွယ်မှုအတွက်အင်တာနာတစ်ခု တည်ငြိမ်နှင့်မပြတ်မတောက်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒါပေမယ့်လည်း Mbuynow 360ºကင်မရာကို cable ကြိုးဖြင့်ဆက်သွယ်နိုင်သည် ဖြစ်နိုင်သော ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းသို့မဟုတ်ဝိုင်ဖိုင်ဆက်သွယ်မှုဖြတ်တောက်ခြင်းများကိုရှောင်ရှားရန်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒါအတွက်ပါဝါချိတ်ဆက်မှုအနီးမှာ cable တစ်ခုရှိဖို့လိုလိမ့်မယ်။
ငါတို့မြင်သည်အတိုင်း, Mbuynow ကင်မရာ ၎င်းသည်၎င်း၏တည်နေရာကိုပြောင်းလဲရန်ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုဒီဇိုင်းမထားပါ။ တပ်ဆင်ပြီးသည်နှင့်၊ ကွန်ယက်ကေဘယ်နှင့်မပါဘဲနေရာကိုပုံသေသတ်မှတ်လိမ့်မည်။ အဘယ်အရာကိုငါတို့သည်သင်တို့ကိုအာမခံနိုင်ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ် မှန်ကန်စွာနေရာချ ကောင်းသောမြင်သာနှင့်အတားအဆီးမရှိဘဲareaရိယာ၌တည်၏ အပြည့်အဝ360ºဖုံးလွှမ်းလိမ့်မယ် သင်အခန်းထဲမှာရှိနေတယ် အရာအားလုံးကိုထိန်းချုပ်ထားပါ၊ ယခု Mbuynow IP 360º Surveillance ကင်မရာကို ၀ ယ်ပါ အမေဇုံအပေါ်။ Y37LAI3Q ကုဒ်နှင့်သင်၌ ၁၀% လျှော့စျေးရှိကြောင်းသတိရပါ။
Mbuynow 360ºစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုသည့်ကင်မရာသည်အရည်အသွေးနှင့်စျေးနှုန်းအချိုးကိုဂရုပြုလျှင်စျေးကွက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေနိုင်သည့်အကောင်းဆုံးကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်မှာသေချာသည်။ ကျွန်တော်တို့ကိုကမ်းလှမ်းသည် တစ်ခုတည်းထုတ်ကုန်အတွက်အများအပြားဖြစ်နိုင်ခြေ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာစျေးနှုန်းဖြင့်၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့ရရှိနိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်အိမ်တွင်သို့မဟုတ်သင်၏စီးပွားရေးတွင်အမြင့်ဆုံးလုံခြုံမှုရှိစေလိုသည်ဆိုလျှင်မှန်ကန်သောရွေးချယ်မှုဖြစ်လိမ့်မည်။
ငါတို့မှာa2 megapixel HD မှန်ဘီလူးပါသော CMOS အာရုံခံကိရိယာ ကမ်းလှမ်းသည် 1920 x 1080 ပုံရိပ်ပြတ်သားမှု။ တူညီတဲ့မျက်နှာစာမှာ အဖြူရောင်အလင်း LEDs ကြောင်းတစ် ဦး အဟန့် function ကိုအတူareaရိယာကိုထွန်းလင်း။ ပြီးနောက် ကျွန်တော်တို့ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းနှင့်ရောင်စုံညဉ့်ရူပါရုံကိုကမ်းလှမ်းသောအနီအောက်ရောင်ခြည် LEDs.
ရှေ့ ဘယ်မှာမှန်ဘီလူးနှင့်အလင်းအိမ်တည်ရှိသည် မိုက်ကရိုဖုန်းကိုတွေ့လိမ့်မယ်။ သူနှင့်လည်းကျွန်ုပ်တို့တတ်နိုင်သည် အသံဖမ်းယူခြင်းနှင့်မှတ်တမ်းတင် အဆင်ပြေတဲ့ဗွီဒီယိုကွန်ဖရင့်တောင်တောင်မှရှိတယ် ၎င်း၏နောက်ကျောတွင် တွေ့ပြီ စပီကာ။ မှတဆင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကင်မရာရှေ့မှာမည်သူမဆိုနှင့်ဆက်သွယ်နိုင်သည်။ စပီကာနှင့် Siren-type အမျိုးအစားနှိုးစက်အသံ ကျွန်တော်တို့ထုတ်လွှင့်နိုင်တာကမလိုချင်တဲ့ visitors ည့်သည်တွေကိုလည်းဝေးဝေးရှောင်သွားစေနိုင်တယ်။
Mbuynow ကိုပိုပြီးစိတ် ၀ င်စားဖို့လုပ်နိုင်တဲ့နောက်ထပ်တစ်ခုကနောက်တစ်ခုပါ ရွေ့လျားမှုထောက်လှမ်းနည်းပညာ။ အလင်းသို့မဟုတ်အသံကဲ့သို့သောလုပ်ဆောင်ချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့အကောင်အထည်ဖော်နိုင်သည်။ အမည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကင်မရာကိုပရိုဂရမ်ရေးဆွဲနိုင်သည်။ သို့မှသာအချက်ပြသံသို့မဟုတ်လှုပ်ရှားမှုကိုတွေ့ရှိသောအခါမီးစတင်မည်.
၎င်းသည်အိမ်၏ရှေ့မှောက်၌ဖြစ်စေ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးတွင်ပါ ၀ င်ခြင်းမျှသာဖြစ်စေသည်။ ထို့အပြင်မီးများနှင့်အသံများကသူငယ်ချင်းများကိုအခြားသူများနှင့်ဝေးဝေးနေစေရန်ကူညီလိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင်ဟာပြည့်စုံပြီးဈေးသက်သာတဲ့လုံခြုံရေးစနစ်ကိုရှာဖွေနေတယ်ဆိုရင်၊ ဤနေရာတွင်သင်သည် Mbuynow IP 360ve Surveillance ကင်မရာကို ၀ ယ်နိုင်သည် အမေဇုံအပေါ်။ ထို့အပြင် ၁၀% လျှော့စျေးကုဒ်ကိုသုံးရန်မမေ့ပါနှင့်။ Y10LAI37Q ။
အစွမ်းထက်သော hardware နှင့်ကောင်းမွန်သော level features များရှိခြင်းအပြင် ဤကင်မရာမှလုပ်ဆောင်နိုင်သည့်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုပြည့်စုံသောအသုံးချမှုကြောင့်တိုးချဲ့ထားသည်။ လျှောက်လွှာကိုငါတို့အထူးဖန်တီးနိုင်အောင်အထူးဖန်တီးခဲ့တယ် ဒီကင်မရာကပေးတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုအများဆုံးရယူပါ။ ထိုသူ၏ကျေးဇူးတင်စကား ရိုးရှင်းပြီးအလိုလိုသိစစ်ဆင်ရေး ကျနော်တို့ပထမ ဦး ဆုံးအခိုက်အနေဖြင့်အသုံးပြုနိုင်သည်။
ကျနော်တို့စကင်ဖတ်စစ်ဆေးရပါလိမ့်မယ် QR ကုဒ်ကို ကျွန်တော်တို့ဟာလမ်းညွှန်စာအုပ်ထဲမှာရှာတွေ့လိမ့်မယ်၊ အဲဒါကိုကျွန်တော်တို့ကိုလျှောက်လွှာစတိုးဆီခေါ်သွားမှာပါ။ App ကိုသွင်းပြီးသည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ရမည် အကောင့်တစ်ခု Create. ကင်မရာထည့်မယ် QR ကုဒ်ကိုထပ်မံ အသုံးပြု၍ ဤတစ်ကြိမ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကင်မရာကိုယ်နှိုက်တွင်တွေ့လိမ့်မည်။ ကင်မရာသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ Wi-Fi ကွန်ယက်သို့ချိတ်ဆက်ပြီးသည်နှင့်အရာအားလုံးအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီ.
ကျေးဇူးတင် Mbuynow IP Camera ရှိမိုက်ခရိုဖုန်းနှင့်စပီကာ ကျနော်တို့အသုံးဝင်မှုထက်ပို၏အသုံးပြုမှုကိုဖြစ်စေနိုင်သည် bidirectional ဆက်သွယ်ရေး။ ကျွန်ုပ်တို့၏စမတ်ဖုန်း၊ တက်ဘလက် (သို့) ကွန်ပျူတာမှမည်သည့်နေရာတွင်ရှိနေသည်ဖြစ်စေကျွန်ုပ်တို့ရှေ့မှောက်ရှိမည်သူမဆိုကိုကင်မရာမှတဆင့်ဆက်သွယ်နိုင်သည်။ တစ် ဦး ကယ့်ကိုအသုံးဝင်သောအင်္ဂါရပ်။
YCC365 Plus အား
ပုံစံ IP ကင်မရာ XF-XY03
sensor2Mpx
မြင်ကွင်းကျယ်လည်ပတ် 360º x ကို120º
မှန်ဘီလူး 3.6 မီလီမီတာ
resolution ကို X ကို 1920 1080
Memoria 128GB + မိုXNUMX်းတိမ်အထိ Micro SD က
ရှုထောင့် X ကိုက x 20 20 12 စင်တီမီတာ
စြေး 99.99 €
ဝယ်ယူ link ကို Mbuynow IP 360ºစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုသည့်ကင်မရာ
10% လျှော့စျေးကုဒ် Y37LAI3Q
Mbuynow IP Camera ၏ကောင်းကျိုးနှင့်ဆိုးကျိုးများ
ကွဲပြားခြားနားသောဆက်သွယ်မှုများဖြစ်နိုင်ခြေ; ဝိုင်ဖိုင်မှတဆင့် (သို့) ကင်မရာသို့တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ထားသောကွန်ယက်ကြိုးဖြင့်ကြိုးမဲ့စနစ်ဖြစ်သည်။
ညဘက်မြင်ကွင်းအတွက်အစွမ်းထက်သောအလင်းရောင်နှင့်အနီအောက်ရောင်ခြည် LED များရှိခြင်းသည်သင်၏စောင့်ကြည့်ခြင်းဖြစ်နိုင်ခြေကိုတစ်နေ့လျှင် ၂၄ နာရီအထိတိုးချဲ့သည်။
သီးသန့်ကုဒ်ကို အသုံးပြု၍ ၁၀% လျှော့စျေး - Y10LAI37Q သင် Amazon တွင်အသုံးပြုနိုင်ပြီးဖြစ်သည်
illumination and infrared LEDs
Mbuynow IP ကင်မရာ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » reviews » ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ Mbuynow IP Camera၊ သင်၏လုံခြုံရေးစနစ်သည်အခကြေးငွေမလိုပဲ
ဆမ်ဆောင်းက၎င်း၏ခေါက်ထားသည့်ဖုန်းများ၏ ၆ သန်းအထိရောင်းချရန်မျှော်လင့်နေသည်